Chiziviso chitsva cheiyo iPhone 6s naSiri naPatrick Neil Harris | IPhone nhau
Itsva iPhone 6s kushambadzira naSiri naPatrick Neil Harris: "Maita basa kutaura"
Apple nezuro yakaburitsa chiziviso chitsva cheiyo iPhone 6s uye 6s Plus. Sezvo mune zvimwe zvakawanda zviziviso, chii chinokurudzirwa mune iyi nyowani nzvimbo kushambadzira ndiSiri, kunyanya iyo "Hei Siri" basa Naiyo yatinogona kukumbira mubatsiri wedu pasina kudzvanya bhatani rekutanga kana kubatanidzwa kune magetsi, chero bedzi tine chizvarwa chinotevera iPhone.
Siri padivi, nyeredzi yechiziviso ichi mutambi anotamba Barney Stinson mu "Maitiro Andakaita Mai Vako"Maitiro Angakaita Amai Vako kana HIMYM yevamwe mafeni), Patrick Neil Harris, ichiita neimwe nzira hunhu hwamuita mukurumbira mumakore gumi apfuura. Iwe une chiziviso pazasi.
Ndinokutendai kutaura, naSiri naPatrick Neil Harris
Patrick: Hei Siri: verenga yangu "Ndatenda Kutaura kwaunoita" chinyorwa.
Siri: Chinyorwa chako chanhasi chinoti: maiwe zvangu. Kune vanhu vazhinji kwazvo vekutenda: Amai, Baba, David, vana vangu, vachiona izvi vari kumba. Iwe unofanirwa kunge wakarara izvozvi! Chimbomira kuseka. Zvakanaka, vari kundiona ndichinonoka. Kutenda kwazvo.
Patrick: Ini ndichave ndakanyanya kusikwa.
Chiziviso, che 30 seconds pakureba, zvinopera nerunyorwa "Hands-free Siri pane iPhone 6s" uye, kunyangwe zvingave zvinosetsa senge zvimwe zvakafanana kushambadza, kwandiri zviri kure kwazvo muchinhu ichi cheshambadziro mbiri dzakabuda chikara chekuki (Cookie Chikara).
Maoko-asina Siri kana iro "Hei Siri" basa nderimwe rezvinhu zvitsva zvakauya pamwe neiyo iPhone 6s uye iPhone 6s Plus munaGunyana apfuura. Kutenda kune M9 co-processor, iyo nyowani iPhones (uye iPad Pro) inogona kugara iri pakamira ichichengetedza hupenyu hwebhatiri uye, kusiyana nemidziyo yapfuura, ivo havafanirwe kuvharirwa mune inobuditsa magetsi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » Siri » Itsva iPhone 6s kushambadzira naSiri naPatrick Neil Harris: "Maita basa kutaura"